UMkhize uthi eminye imijovo yokugoma iyeza – kodwa akusibo bonke abawufunayo | Scrolla Izindaba
UMkhize uthi eminye imijovo yokugoma iyeza – kodwa akusibo bonke abawufunayo
Ngemuva kokumemezela ukuthengwa kwemithamo eyizigidi eziyi-1.5 yomuthi wokugoma i-AstraZeneca ngoLwesine, uNgqongqoshe Wezempilo waseNingizimu Afrika uDkt Zweli Mkhize utshele i-Sunday Times ukuthi imizamo iyaqhubeka ukuze kutholakale eminye imigomo yezwe.
Uhulumeni unethemba lokuthi ekugcineni uzogoma abantu baseNingizimu Afrika abayizigidi ezingama-40.
Kunemibuzo nokho mayelana nokuthi uhulumeni uzoyiphatha kanjani le mithi yokugoma njengoba cishe uhhafu wezwe uthi ngeke uyithathe, ngokusho kocwaningo lwakamuva oluvezwe kwi-Daily Maverick.
IJaji Eliyinhloko uMogoeng Mogoeng ungumuntu ovelele kakhulu ongabaza ukuphepha nokusebenza komuthi wokugoma, eyibiza ngokuthi “umsebenzi kasathane”.
Ukungabaza umuthi wokugoma kuyinkinga nje eyodwa uhulumeni abhekene nayo.
Isitatimende sikaMkhize silandela ukugxekwa emasontweni aminingi edlule ngumphakathi wezesayensi waseNingizimu Afrika ukuthi izwe belingenzanga ngokwanele ukuthola imigomo.
Kuze kube uLwesine, bebengakayithengi, okuyilapho amazwe amaningi athuthukile eseqalile ukuba nayo imigomo.
Umbhalo obanzi wokukhishwa kukahulumeni uveza ukuthi, uhulumeni uhlose ukugoma abantu abangafika kuma-316,000 ngosuku.
Ibuye ithi, uhulumeni uzodinga abantu abazogomisa abayizi-6 300, abazogoma abantu abangafika kuma-50 ngosuku.
UNgqongqoshe Wezempilo uphinde wakuqinisekisa ukuthi uhulumeni ube nezingxoxo nabakhiqizi base-Russia nase-China ukuze bathole imithi yokugoma kubo.
Ubuye wengeza ukuthi uhulumeni usesigabeni sokuxoxisana esithuthukile nabanye abakhiqizi.
Uma usutholakele, imithi yokugoma izonikezwa ngezigaba ezintathu.
Isigaba sokuqala sizobhekiswa kubasebenzi bezokunakekelwa kwezempilo abaphambili ezweni abayizigidi eziyi-1.25.
Esigabeni sesibili, umuthi wokugoma uzonikezwa abantu abadala (izakhamuzi eziyizigidi ezi-5 ezingaphezu kweminyaka engama-60 ubudala); Abasebenzi ababalulekile abayizigidi ezi-2.5; Abantu abayizigidi eziyi-1.1 ezindaweni eziminyene; kanye nezigidi eziyi-8 zabantu abanezifo.
Esigabeni sesithathu nesokugcina, abantu abadala abaneminyaka engaphezu kweyi-18 bazogoma.